सिल्टल शेयर एक वेबसाइटबाट डाटा स्क्रैप गर्ने उत्तम तरिका
अक्टोपारे एक उपयोगी र शक्तिशाली डेटा स्क्रैपिंग उपकरण हो. यो अनुकूलित गर्न र अर्को स्तर सम्म आफ्नो डाटा निष्कर्षण प्रयास धक्का गर्न सक्छ. अक्टोपारे दुवै नि: शुल्क र सशुल्क संस्करणहरूमा आउँछ. यसको नि: शुल्क संस्करणको साथ, तपाईं चाँडै पाँच हज़ार वेब पेजहरु लाई छिटो गर्न सक्नुहुन्छ.
अक्टोपारे इन्टरनेटबाट डेटा संकलन र स्क्रैप गर्दछ र विश्वभरि 150,000 भन्दा अधिक प्रयोगकर्ताहरू छन्. 2014 बाट, अक्टोपारेले उच्च-प्रोफाइल डेटा निष्कर्षण सेवा प्रदान गर्दै र जहाँ पनि आवश्यक सुधार गर्न प्रयास गर्छ.
डाटा सामान्यतया इन्टरनेटमा असंगत रूप मा उपलब्ध छ. अक्टोपारे के साथ, तपाईं केवल आफ्नो डेटा स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्न तर यसलाई यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्दछ. उपलब्ध जानकारी बहुमूल्य जानकारीमा बदल्न सकिन्छ, अक्टोपियरको लागि धन्यबाद गर्न यो सम्भव छ. यसको केही विशेषताहरू तल उल्लेख गरिएका छन्.
1. गैर-प्रोग्रामरहरूको लागि राम्रो छ
अक्टोपारेले तपाइँलाई कुनै प्रोग्रामिङ क्षमताहरू बिना इन्टरनेटबाट डेटा निकाल्न सजिलो बनाउँछ।. यो उपकरण गैर-कोडक र गैर-प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ र स्वचालित रूपमा दुवै गतिशील र आधारभूत साइटहरूबाट वेब सामग्री निकाल्छ।. साथै, यसले हामीलाई सफा, संरचित रूपमा डेटा बचत गर्न अनुमति दिन्छ. अक्टोपारे के साथ, तपाईं सजिलै संग कस्टम API हरूमा डेटा घुमाउन र वांछित परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ.
2. क्लाउड सेवाको रूपमा अक्टोपारे:
अक्टोपारे एक क्लाउड-आधारित प्लेटफर्म हो जसले एक घण्टामा धेरै वेब पेजहरू निकाल्छ र तपाइँलाई इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्दछ, तपाईंको समय र ऊर्जा बचत गर्दछ।. तपाई हार्डवेयर सीमाहरूको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दैन किनकि यो उपकरणलाई कुनै पनि मर्मतको आवश्यकता छैन र नियमित आधारमा यसको कार्य गर्न सक्दछ.
3. अक्टोपारे के साथ मूल्यहरु मा नजर राख्नुहोस:
अक्टोपारे को सबै भन्दा विशिष्ट विशेषताहरु मध्ये एक छ कि यो तपाईंलाई मूल्यहरु को निगरानी मा मदद गर्दछ र विभिन्न उत्पादनहरु को तुलना. यो अमेजन र ईबे जस्तै खरीदारी वेबसाइटहरूको लागि उपयुक्त छ र तपाईंको प्रतिस्पर्धी साइटमा सजिलै संग डेटा प्राप्त गर्दछ. यसको अतिरिक्त, यो उपकरणले केही समयको साथ वास्तविक-समय डाटा स्क्रैप गर्दछ र धेरै समय बचत गर्दछ.
4. अगुवाहरू उत्पन्न गर्नुहोस्:
अक्टोपारेको साथ, तपाईं सुर्ती उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ र सेकेन्ड भित्र आफ्नो बिक्री सूची निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईंलाई कुनै पनि प्रोग्रामिंग क्षमताको आवश्यकता छैन किनकि अक्टोपारेले स्वचालित रूपमा डाटाको ठूलो मात्रा स्क्रैप गर्दछ. यसले तपाईंलाई ब्रान्डलाई राम्रो तरिकाले प्रचार गर्न वा विज्ञापित गर्न मद्दत गर्नेछ. अक्टोपारे के साथ, तपाईं आफ्नो मार्केटिंग रणनीतिहरु लाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रो निर्णय र भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ.
5. विद्यार्थी र शिक्षकहरूको लागि राम्रो छ:
छात्रवृत्ति र शिक्षकहरूलाई सधैं उनीहरूको अनुसन्धानलाई बलियो बनाउन आवश्यक डेटा चाहिन्छ. अक्टोपारे के साथ, तपाईं सम्भव छ धेरै वेब पेजहरु लाई स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलै संग ebooks र पत्रिकाहरु को जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्. यसले तपाईंलाई कुनै समयमा अर्थपूर्ण र स्केलेबल योग्य डेटा प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ.
6. प्वाइन्ट-ए-क्लिक इन्टरफेस:
अक्टोपारे आफ्नो पोइन्ट र क्लिक इन्टरफेसको लागि उत्तम जान्दछ. यसको उन्नत मेशिन सिकाइने टेक्नोलोजी पत्ता लगाउँदछ र केहि क्लिन्टहरूसँग डेटा स्क्रैप गर्दछ. तपाईले भर्खरै डाटालाई स्क्रैप गर्न वा वेबसाईट यूआरएल घुसाउन चाहानुहुन्छ र अक्टोपारेले आफ्नो कार्य गर्न चाहानु भएको डाटालाई हाइलाइट गर्न आवश्यक छ. यसले स्क्रिन पछि सबै गन्दा काम गर्नेछ.
7. सबै प्रकारका वेबसाइटहरूसँग सम्झौताहरू:
चाहे तपाइँ निजी ब्लग वा गतिशील वेबसाइटबाट डेटा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने, अक्टोपारेले सबै प्रकारका साइटहरूसँग सजिलैसँग सम्झौता गर्न सक्दछ।. तपाईं जाभास्क्रिप्ट, AJAX, र एचटीएमएल कागजातहरूबाट पनि (4 9) स्क्रैप डेटा सक्नुहुन्छ र तपाईंको समय र ऊर्जा बचत गर्न सक्नुहुनेछ Source .